2017 ရဲ့ စာတစ်ပုဒ် - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Beware about Pollen!
Next: “ဟာလေးလျူးယား” »
Myanmar Blog » shweDarling » 2017 ရဲ့ စာတစ်ပုဒ်
လူရွှင်တော်မေတ္တာ ပြောပြတဲ့ အကြောက်တရား ၂ မျိုး
ပန်းတနော်မြို့ အကယ်ချောင်းကျေးရွာမှာ အင်္ဂါနေ့က ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ တောင်သူလယ်သမားနဲ့ ရေလုပ်သားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသမဂ္ဂ ညီလာခံကို လူရွှင်တော် မေတ္တာလည်း လာရောက်ပြီးတော့ အားပေးစကား
သားကြီးမရေ အမျှအမျှ ကျွန်တော်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ၅/၁၁/၂၀၁၆ နေ့  ဧရာဝတီလင်းပိုင် လေ့လာရေးသွားစဉ် လင်းပိုင် ဆရာကြီး ဦးမောင်လေးနဲ့အတူ အင်ဒေါင်းရွာ အနီးမြစ်ပြင်ထဲ လှေငယ်တစီးနဲ့ သွားခဲ့ပါတယ် သူတို
ရန်ကုန်၊ဇန်နဝါရီ၊ ၂၁။ ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မိုင် ရှစ်ရာကျော် ဝေးကွားသည့် ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့သို့ ရန်ကုန်မှ ငြိမ်းချမ်းရေး အလံသယ်ဆောင်သည့်
Hunkie of the day – Min Maw Koon
Today’s hunkie is Min Maw Koon. Yes, he may be